‘मोदी बन्न सजिलो, ट्रम्प गाह्रो’ - संवाद - नेपाल
श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद भएका कारण हास्य कलाकार मनोज गजुरेल केही समय चर्चाको अग्रभागमा देखिए । गजुरेल अन्तर्राष्ट्रिय कमेडियन–सूचीमा परेको उपलब्धि पनि चर्चित रह्यो । सीबीएस न्यूजले गजुरेललाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको क्यारिकेचर गर्ने विश्वका प्रभावशाली १८ कमेडियनमा सूचीकृत गरेको छ । यसै सन्दर्भमा गजुरेललाई सोधिएका प्रश्नहरु :
ट्रम्पको क्यारिकेचर गर्ने कमेडियनको सूचीमा परेको थाहा पाउँदा सबैभन्दा पहिले के सोच्नुभयो ?
सूचीमा आफू परेको समाचार मैले पुरानो भएपछि थाहा पाएँ । दुई महिनाअघि नै सूची निस्किसकेको रहेछ । मलाई भने भर्जिनियामा बस्ने ह्यारी भण्डारीले म्यासेज गरेपछि थाहा भयो । सुनेपछि त म अचम्ममा परेँ । अमेरिकामा थुप्रै कमेडियन छन् । तर, म सूचीमा अटाउनु गर्वको कुरा हो ।
ट्रम्पको क्यारिकेचर गर्ने सोच कसरी पलाएको थियो ?
दुई वर्षपहिले अमेरिका जाँदा साथीहरूले यो मान्छे अब कि त राष्ट्रपति बन्छ, नबने पनि सधैँ चर्चामा रहिरहन्छ, यसैले उसको क्यारिकेचर गर्ने तयारी गर्दा हुन्छ भनेर सुझाव दिए । नभन्दै उनी राष्ट्रपति चुनिएपछि चर्चामा रहे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको क्यारिकेचर गरेर विश्वभर चर्चा कमाएको थिएँ । नाकाबन्दीका कारण नेपालीले दु:ख पाएको सन्देश विश्वभर फैलियो । भूमण्डलीकरणको युगमा ट्रम्पको क्यारिकेचर गर्न सोच्नै परेन ।
ट्रम्प र मोदीको क्यारिकेचर गर्दा के फरक अनुभव भयो ?
पर्फर्मेन्स गरिसकेपछि त त्यस्तो फरक लागेन । तयारीका क्रममा भने भिन्नता रह्यो । मोदीभन्दा ट्रम्प बन्न बढी मिहिनेत गर्नुपर्‍यो ।
छिमेकी मुलुक भएकाले मोदीको नक्कल गर्न भाषा, हाउभाउ र आवाज सिक्न समय लागेन । तर, ट्रम्प बन्न जम्मै सिक्नुपर्ने भयो । ‘नेटिभ’ आवाज निकाल्नुपर्‍यो । संसारकै शक्तिशाली देशका राष्ट्रपतिको क्यारिकेचर गर्दा त्यो स्तरको विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने चुनौती थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुमा नेपाली दर्शकलाई हँसाउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने संकोच थियो ।
प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो त ?
त्यसपछि त अमेरिकाका पाँचवटा राज्यमा ट्रम्पको क्यारिकेचर गर्न प्रस्ताव आयो र गरेँ ।
ट्रम्प कमेडीको अविस्मरणीय पाटो केही छ ?
दर्शकलाई बुझाउन सकुँला कि नसकुँला भनेर स्टेजमा चढ्दा म नर्भस भएँ । दर्शकमाझ उभिएपछि जब ताली गुञ्जियो, त्यसको तरंगले मेरो मस्तिष्क झन्झनायो र एकाएक आत्मविश्वास भरियो ।
अमेरिकाको प्रस्तुतिचाहिँ कस्तो रह्यो ?
ट्रम्पलाई व्यंंग्य गर्दा आफूहरूलाई केही होला कि भनेर नेपाली डराए । प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, केही हुँदैन भनेर कार्यक्रम गरियो । त्यसपछि त ट्रम्प (म)सँग फोटो खिचाउनेको भीड लाग्यो ।
अहिलेसम्म आफूलाई चित्त नबुझेको क्यारिकेचर कसको हो र किन ?
लोकमानसिंह कार्की । उनी कुनै बेला शक्तिशाली पात्र थिए । त्यस दृष्टिले उनी व्यंग्य गर्नैपर्ने पात्र थिए । उनको नाम सुने पनि बोली, आवाजबारे थाहा थिएन । त्यसैले उनको क्यारिकेचर गर्दा मैले दर्शकलाई बुझाउन सकिनँ ।
हास्य क्षेत्रमा सफल हुनुभयो तर वैवाहिक जीवन त दुर्घटनामा पर्‍यो, किन ?
गम्भीर रूपमा लिँदालिँदै जीवनका कतिपय कुराहरू हाम्रो नियन्त्रणबाहिर हुन सक्छन् । ईश्वरको यो कृपालाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन ।
ट्रम्प एकदमै अनुदारवादी नेता मानिन्छन् । तपाईंको व्यवहार पनि अनुदारवादी भएकैले यस्तो घटना भएको हो कि ?
समयक्रममा आफैँ प्रश्न र उत्तर आउँछन् । जीवनका आरोह–अवरोहबाट सिकेर अगाडि बढ्ने हो ।
यो घटनाले आफ्नो करिअरमा धक्का लागेको महसुस गर्नुहुन्छ ?
दर्शकलाई जस्तो प्रस्तुति दिइन्छ, आफ्नो जीवन पनि त्यस्तै बनाउने प्रयास सबैले गरेका हुन्छन् । चन्द्रमामा पनि सानो दाग हुन्छ । मेरो जीवनमा पनि सानो दाग लाग्यो । क्यारिकेचरबारे अब कर्मले जवाफ दिने हो, शब्दले होइन ।
क्यारिकेचरबाट तपाईंले कमाएका र गुमाएका कुरा के हुन् ?
गुमाएको केही छैन । राजनीतिक पृष्ठभूमि र पत्रकारिताको पढाइले मलाई विश्लेषणात्मक बनायो र सस्तो मनोरञ्जनको साधन मात्रै बनिनँ । धेरैको माया पाएँ ।
कसैको क्यारिकेचर गर्ने भित्री इच्छा छ ?
क्यारिकेचर कसको गर्ने/नगर्ने भन्ने निर्धारण तत्कालीन परिस्थितिले सिर्जना गर्ने भएकाले त्यस्तो इच्छा हुने कुरै भएन ।
अचेल क्यारिकेचरले गालीको रूप लिँदै गएको हो ?
ज्यादै हल्का र ठाडै गाली गर्ने ट्रेन्ड देखिन्छ । तर, अब बिस्तारै यसमा सुधार आएको छ ।